Isango lezenkolo kubuKatolika
Zeziphi izipho esizifumana kuBhaptizo?
Udidi: thetha ngoThixo 0
Liliphi igama esilifumanayo xa sibhaptizwa? Kufuneka sibhaptizwe ukuze sixolelwe izono zethu Umpostile uPetros wabongoza: “Guqukani, nibhaptizwe nonke ngabanye egameni…
Imibuzo Edla Ngokubuzwa: Yintoni uKesare eBhayibhileni?
Yintoni uKesare ngokwebhayibhile? Igama elithi "kesare" lisoloko lisetyenziswa, kumazwe anesithethe sobuKristu, ukuchonga amandla exeshana (ngokuchaseneyo namandla...
Ubuzile: Lwalunjani uHlaziyo lonqulo?
Kuthetha ukuthini uhlaziyo lonqulo? LUYINTONI UHLAZIYO LWEENKONZO… UHlaziyo lobuProtestanti—okanye, ngokulula, uHlaziyo—lwaziwa ngokuba yintlangano yonqulo lwamaKristu eyaqala eJamani eJamani...
Eyona mpendulo ingcono: Kuthetha ukuthini ukuthandaza i-novena?
Lifanele livakaliswe njani iLizwi likaThixo? Yenziwa njani i-novena? Ukuthandaza le novena kufuneka uthandaze yonke imihla umthandazo ukuze uqalise, umthandazo ...
Umbuzo: Wayengubani uKumkani uSawule ngokutsho kweBhayibhile?
Ngubani owabulala uKumkani uSawule weBhayibhile? Ukumkani owenzakeleyo, ecinga ukuba angabanjwa ngamaFilisti, wacela umphathi weentonga zakhe ukuba ambulale, kodwa...
Yintoni inkanuko kwiCawa yamaKatolika?
Ithini iBhayibhile ngenkanuko? Ngoko ke, inkanuko igqalwa njengehambo yesono okanye yokuziphatha okubi, njengoko kubonisiwe eBhayibhileni kule ncwadi...
Yintoni uthixo wenkolo yemveli yamaTshayina?
Yintoni unqulo lwemveli? Iinkonzo zemveli zisekwe kumsitho omkhulu wokutshintshiselana ngabaphilayo nezinyanya zabo kwaye ngokulandelelana…
Yiyiphi imisebenzi yeCawa yamaKatolika?
Yintoni umsebenzi weCawa yamaKatolika? Phakathi kwemisebenzi yayo emithathu ebalulekileyo yile: Fundisa, Ngcwalisa kwaye ulawule, eyenza iyunithi; ngenxa yale nto...
Siyintoni isono sikaBan esibulalayo?
Ngubani uBan kwizono ezi-7 ezibulalayo? U-Ban (Nanatsu no Taizai) Vala uMsebenzi weLungu lezono eziSixhenxe ezibulalayo Imvelaphi yeHlathi leKumkani yeeNgonyama…
Umbuzo: AmaRoma abuxelisa njani ubuKristu?
Kwakutheni ukuze amaKristu atshutshiswe ngamaRoma? Esona sizathu sisenokuba sesona sizathu sentshutshiso yayi, ngakwicala lamaYuda, luqhekeko olucacileyo lokuba...
1 2 ... 6,338 Okulandelayo
Kwiintshumayelo zakhe, wafundisa amarhamente ukuba ukusebenza akusosiqalekiso, kodwa yindlela yosindiso, ngaloo ndlela uArcangelo Tadini waphembelela ngokungangqalanga ukuphuhliswa kwemfundiso yezentlalo yeCawa yamaKatolika.
Wathini uYesu kubapostile bakhe?
Indlela yokoyisa ubukrakra ngokutsho kweBhayibhile?
Yintoni isibakala sonqulo yaye iyintoni imvelaphi yayo?
UYesu wabakhetha nini abapostile abali-12?
Kwenzeka ntoni kuYudas emva kokuba engcatshe uYesu?
Ubuzile: Ithetha ukuthini ingca eBhayibhileni?
Eyona mpendulo: Ithini iBhayibhile ngoMordekayi?
© 2022 uThixo Ongunaphakade
Ifowuni | Ngoobani | Umgaqo-nkqubo wabucala kunye neeKuki
¡ATENCIÓN A LOS TITULARES DE DERECHOS! ¡Todos los materiales se publican an el sitio estrictamente con fines informativos y educativos! Si cree que la publicación de cualquier material infringe sus derechos deautor, asegúrese de contactarnos a través del formulario de contacto y su material será eliminado.